Telefoonada la laaban karo ayaa ka nool sidii hore weligood | War gadget
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa ugu da'da weyn meesha, oo mararka qaarkood qolofka ama taleefanka isku laaban uu ka soo maray gacmahaaga, waxaa hubaal ah mar kasta oo lagu dhawaaqo taleefan cusub oo nuucaan ah. waxaad xasuusan doontaa dareenkii kugu soo duulay mar kasta oo aad u isticmaasho si aad u hesho ama u dhigto wicitaan. Sacabbo! Waxay ahayd qabow.
Aasiya waa suuq leh malaayiin milyan oo isticmaaleyaal ah, telefoonada isku laabanna ay wali yihiin amarka maalinta, ma aha inta badan taleefannada casriga ah ee aan lahayn furayaasha jirka, laakiin waxay ku leeyihiin qayb muhiim ah suuqa. Samsung way ogtahay tan oo marba marka ka dambaysa waxay soo saareysaa nooc cusub. Maanta waxaan ka hadlaynaa Samsung Folder 2.
Samsung Folder 2, oo ah taleefan isku laaban, ma bixinayo shaashad yar, oo 3,8-inji ah. Waxaa maamula Processor Qualcomm Snapdragon 425 oo leh afar geesoodka 1,4 Ghz, oo ay wehliyaan 2 GB oo RAM ah. Kaliya shaashadda hoosteeda waxay na siineysaa afar badhan oo qaas ah oo aan ku furi karno kaameradda, u diri karno farriin qoraal ah, hubin karno emayllada la helay oo aan furi karno xiriirada si aan u soo wacno
Qalabka gudahiisa waxaan ka heleynaa 16 GB oo keyd ah iyo 1.950 mAh oo batari ah. Kamaradda hore waa 5 mpx halka kamaradda dambe ay tahay 8 mpx. The Xalinta shaashadda waa 800 × 480 waxaana ku shaqeeya Android Marshmallow. Qiimaha terminaalkan horey suuqa ugu jiray wuxuu kudhowaad yahay 240 euro oo la badalo.
Laakiin haddii aad damacsan tahay inaad qabato, ikhtiyaarka keliya ee aad heli doontaa waa u safro wadamada Aasiya meesha laga heli karo, maadaama ka baxsan kuwan, dalabku aad ayuu u hooseeyaa oo kiraysan maayo shirkadda inay ku iibiso meelo ka baxsan gobolkan. Waqti ka waqti Samsung waxay bixisaa terminalkan Mareykanka, halkaasoo moodada noocan ah ee terminalku ay aad u xoog badneyd iyadoo lagu mahadinayo Motorola Razr, oo ah qalab loo iibiyo sida rootiga rootiga marka uu suuqa ku dhaco, marka haddii aad qorsheyneyso inaad halkaas u safarto, waxaa laga yaabaa waad heli kartaa
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Telefoonada rogrogmada ayaa si ka sii nolol badan weligood ah
Haddii Hahaha…? laakiin yaa u adeegsada 1kiiba 10 mid ka qabow ???
Jawaab Gema Lopez